CR2032 ब्याट्री: सबै भन्दा लोकप्रिय बटन ब्याट्री को बारे मा नि: शुल्क हार्डवेयर
CR2032 ब्याट्री: सबै भन्दा लोकप्रिय बटन ब्याट्री को बारे मा
स्ट्याकको सबैभन्दा प्रसिद्ध ढाँचा वा ब्याट्री CR2032 हो, ठेठ बटन सेल ब्याट्रीहरु कि उपकरणहरु को एक ठूलो संख्या छ। केही क्यालकुलेटरहरूबाट कम्प्युटर मदरबोर्डहरूमा समय र BIOS / UEFI सेटि keepहरू राख्न, घडीहरू, नियन्त्रकहरू, हेडफोनहरू, इत्यादि मार्फत। यस प्रकारको ब्याट्री यसको ठूलो स्थायित्व र यसको सानो आकारले AAA, AA, C, D र 9V जस्ता अन्य ढाँचाहरूको तुलनामा देखाइन्छ।
त्यहाँ फरक छन् ब्रान्डहरू, जस्तै सोनी, डुरसेल, म्याक्सेल, र धेरै अन्य निर्माताहरू। यसको मूल्य € १.1,75 वा € २ को आसपास छ, यद्यपि तपाईले प्याकमा किन्नुहुँदा सस्तो मूल्यहरूको लागि धेरै CR2 ब्याट्रीहरूको साथ छालाहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। मूल्य र स्वायत्तता मात्र चीज उनीहरूलाई आकर्षक बनाउँदैन, उनीहरूको आकार पनि, त्यसैले तिनीहरू साना उपकरणहरूका लागि उपयुक्त छन् जहाँ तपाईं उत्कृष्ट गतिशीलता चाहनुहुन्छ वा ब्याट्रीको आकार अधिकतममा घटाउनुहोस्।
1 बटन ब्याट्री
2 CR2032 विशिष्टता र डाटाशीटहरू
बटन-प्रकार ब्याट्री एक सानो मा encapsulated छन् बटन आकार को धातु पैकेजिंगयसैले यसको नाम। उनीहरूको एउटा अनुहारमा सकारात्मक ध्रुव छ, जुन अनुहारसँग सब भन्दा ठूलो व्याससँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ तिनीहरूसँग प्रायः चिन्ह र शिलालेखहरू हुन्छन्। पछाडी अनुहार मा नकारात्मक ध्रुव छ। तिनीहरूलाई जडान गर्न, कन्डक्टरको साथ बेससँग एक सम्पर्क नकारात्मक ध्रुव र एक फ्ल्यान्जसँग सम्पर्क बनाउन जुन फ्ल्यान्क्स र माथिल्लो क्षेत्र (+) मा सम्पर्क गर्दछ सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। यस तरीकाबाट, ब्याट्रि यसको एक पक्षमा यसलाई हटाउन र यसलाई सजिलै बदल्नको लागि उठाउन सकिन्छ।
यसको लागि सामग्री जो तिनीहरूलाई रचना, यो पाराबाट बनेको हुन सक्दछ (वातावरणको सम्मान नगर्नेको लागि प्रयोगमा), क्याडमियम, लिथियम, आदि। तिनीहरूसँग चार्ज कहिलेकाँही to देखि years बर्षसम्म आपूर्ति गर्न पर्याप्त छ, उपकरणको खपतमा निर्भरता। उनीहरूको कम लागत र लामो जीवनको अतिरिक्त, डिस्चार्जको बखत उत्पन्न हुने तनाव एकदम समान छ, जसले उनीहरूलाई स्पाइक्स वा मिसलमेन्टमेन्ट समयदेखि बच्न उत्तम बनाउँदछ। साथै स्राव तापमान साना उपकरणहरूमा एकीकृत गर्न कम छ।
CR2032, अन्य बटन ब्याट्रीहरू जस्तै यसको लागि बाहिर खडा छ वातावरण परिवर्तन गर्न उच्च स्थिरता, त्यस्तो कुरा जुन अन्य ब्याट्रीहरूले राम्रोसँग समर्थन गर्दैनन्। यसले -20 wideC देखि 60 -C सम्म तापमानको विस्तृत श्रृंखलामा संचालन गर्दछ। तापक्रम जसले तिनीहरूलाई तातो र चिसो ठाउँहरूको लागि उत्तम बनाउँदछ। तिनीहरू भण्डार गर्न पनि राम्रो छन्, किनकि उनीहरूसँग प्रति वर्ष १% भन्दा कम आत्म-स्राव छ, जसले तिनीहरूलाई अन्य ब्याट्रीहरूले 1 गुणा भण्डार गर्दछ।
तिनीहरू मा वितरित छन् आकार, प्रकार, भोल्टेजेस, क्षमता र तौल, र रिचार्जेबल पनि फरक फरक ढाँचा। जस्तो कि तपाई तलको तालिकामा देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा केहि लोकप्रियको साथ:
मूल्यवर्ग Tipo भोल्टेज (V) क्षमता (एमएएच) तौल (छ) व्यास (मिमी) उचाई (मिमी)
CR927 लिथियम330 0,60 9,5 2,7
CR1025 लिथियम330 0,6 10 2,50
CR1130 लिथियम340 0,6 11 3
CR1212 लिथियम318 0,5 12 1,2
CR1216 लिथियम325 0,7 12 1,6
CR1220 लिथियम338 0,85 12 2
CR1225 लिथियम348 10 12 2,5
CR1616 लिथियम350 1,2 16 1,6
CR1620 लिथियम368 1,3 16 2
CR1625 लिथियम390 1,4 16 2,5
CR1632 लिथियम3125 1,6 16 3,2
CR2012 लिथियम355 1,80 20 1,2
CR2016 लिथियम380 1,80 20 1,60
CR2020 लिथियम3115 1,90 20 2
CR2025 लिथियम3170 2,40 20 2,50
CR2032 लिथियम3235 30 20 3,20
CR2040 लिथियम3280 40 20 4
CR2050 लिथियम3310 4,80 20 5
CR2320 लिथियम3150 2,90 23 20
CR2325 लिथियम3190 3,50 23 2,50
CR2330 लिथियम3250 40 23 30
CR2354 लिथियम3350 4,50 23 5,40
CR2430 लिथियम3285 4,50 24 30
CR2450 लिथियम3540 6,50 24 50
CR2477 लिथियम3950 8,3 24 7,7
CR3032 लिथियम3560 80 30 3,20
CTL920 लिथियम आयन 2,3 5,5 0,592
CTL1616 लिथियम आयन 2,3 18 1,6 16 1,60
LR41 क्षारीय 1,5 40 0,5 7,9 3,6
LR43 मैंगनीज 1,5 108 1,2 7,9 1,6
LR44 मैंगनीज 1,5 145 1,9 11,6 5,4
ML2016 लिथियम-मैंगनीज330 1,8 16 1,6
ML2020 लिथियम-मैंगनीज345 2,2 20 2
PD2032 लिथियम आयन 3,7 75 3,1 20 3,3
SR41 रजत अक्साइड 1,55 42 - 7,9 3,6
SR42 रजत अक्साइड 1,55 100 - 11,6 3,6
SR43 रजत अक्साइड 1,55 120 - 11,6 4,2
SR44 रजत अक्साइड 1,55 180 - 11,6 5,4
SR45 रजत अक्साइड 1,55 60 - 9,5 3,6
SR48 रजत अक्साइड 1,55 70 - 7,9 5,4
SR626SW रजत अक्साइड 1,55 28 0,39 6,8 2,6
SR726SW रजत अक्साइड 1,55 32 - 7,9 2,7
SR927SW रजत अक्साइड 1,55 55 - 9,5 2,6
VL2020 लिथियम320 2,2 20 2
CR2032 विशिष्टता र डाटाशीटहरू
को यस CR2032 ब्याट्रीको प्राविधिक सुविधाहरू तिनीहरू छन्:
क्षमता: २235 एमएएच, अर्थात्, यसले २ घण्टा २ 235 एमए दिन सक्छ वा २ घण्टामा ११२ एमए, hours 1 एमए 112 घण्टाको लागि, र यस्तै अन्य ...
वजन: 30 g
मोटाई: 3,20 मिमी
यदि तपाईं डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने CR2032 डाटाशीटतपाईं बिभिन्न निर्माताहरूका आधिकारिक वेबसाइटहरूमा जान सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, यहाँ एक छ:
एनर्जेइजर CR2032 डाटाशीट
तपाइँ धेरै प्रकारका कनेक्टरहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको बटन सेलको लागि बजारमा, तपाईं माथिका फोटोहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू धेरै सस्तो छन्, र तपाइँ तिनीहरूलाई समावेश पिनको साथ बोर्डमा सोल्डर गर्न सक्नुहुन्छ वा प्रकारमा निर्भर गर्दै, तिनीहरूलाई केबलको साथ प्रत्यक्ष जडान गर्नुहोस्।
केहि जडानकर्ताहरू क्लासिक छन्, त्यो आधार कनेक्टर र माथि ट्याबको साथ मैले माथि उल्लेख गरें। अरूहरू केहि फरक छन्, र स्ट्याक वरिपरि पुलमा स्लाइड गर्न अनुमति दिनुहोस्। यस तरीकाले यो दुबै सम्पर्कमा रहन्छ, तर तिनीहरू कार्यक्षेत्र सानो छन् भने हटाउन अलि जटिल हुन सक्छ। कहिलेकाँही यसलाई स्लाइड र प्रतिस्थापन गर्न सजिलो हुँदैन।
अन्य क्लिप प्रकार हुन्, लामो टर्मिनलको साथ जुन माथि ब्याट्री समात्छ र यसलाई बेस कनेक्टरको बिरुद्द थिच्दछ। त्यहाँ केहि पनि छन् जुन बक्स समावेश गर्न सक्दछन् घर एक वा बढी ब्याट्री र तिनीहरूसँग सजिलै जम्पहरूसँग जडान गर्न सक्षम हुन एउटा केबल छ।
यो सबै CR2032 स्ट्याकको लागि हो, मलाई आशा छ कि म सहयोगी भएको छु... कुनै प्रश्न वा योगदान, आफ्नो टिप्पणी छोड्न नबिर्सनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » CR2032 ब्याट्री: सबै भन्दा लोकप्रिय बटन ब्याट्री को बारे मा
विन्डो using प्रयोग गर्ने बित्तिकै म ब्याट्री परिवर्तन गर्न जान्दछु किनकि प्रत्येक घडि रिबुट पछि प्रणाली घडी पछाडि थियो। म लामो समयदेखि लिनक्समा सर्दै छु र मैले महसुस गरें कि मैले धिक्कार स्ट्याक परिवर्तन गरेको छैन। लिनक्समा हामीसँग घडीसँग पनि समस्या छ जब ब्याट्री सकियो?
Loctitte लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, जे भए पनि तपाईसँग के अपरेटिंग सिस्टम छ ... ब्याट्री जे भए पनि समाप्त हुन्छ। याद गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको घडी UTC का साथ समिकरण गर्न सक्नुहुन्छ।
जोस डियाज भन्यो
CR2032 H र CR2032 (H बिना) के बीच के भिन्नता छ?
जोस डाजालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार जानकारी को लागी धेरै धन्यबाद।
मलाई लाग्छ पृष्ठमा त्रुटि रहेको छ, वा मैले यी मापनहरूको कारण बुझ्न सकेन।
संख्याको सन्दर्भमा केही उचाइहरू अन्तिम दुई अंकहरूमा मिमीमा दिइन्छ, तर अल्पविरामको साथ, उदाहरणका लागि, २०2032२ 3,2..२ मिलिमिटर हो। तपाईंले त्यो अल्पविराम बिना केही नापहरू राख्नुभयो; उदाहरण तपाईंले सीआर २2330० मा राख्नुभयो जुन mm० मीमी उपाय गर्दछ, त्यो हो, cm सेमी।
होममेड कार सिम्युलेटर: कसरी यसलाई चरणबद्ध रूपमा एकै ठाउँमा भेला गर्ने